शिवश्री हाइड्रोले ३५ करोडको सेयर निष्कासन गर्ने - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
शिवश्री हाइड्रोले ३५ करोडको सेयर निष्कासन गर्ने
मङि्सर १९, २०७४ 9008 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
सिन्धुपाल्चोकमा २२.२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको शिवश्री हाइड्रो पावर लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई सय कित्ता मूल्य अंकित ३५ करोड रुपैयाँबराबरको ३५ लाख कित्ता सेयर साधारण सेयर जारी गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित तथा स्थानीयलाई छुट्ट्याइएको १४ करोड रुपैयाँको १४ लाख कित्ता सेयर जारी गर्ने जनाएको छ । यसपछि बाँकी सेयर सर्वसाधारणलाई वितरण गरिनेछ । कम्पनीका अनुसार अहिलेसम्म आयोजनाको करिब ८५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको फुलपिङकट्टी र मारमिङमा निर्माण भइरहेको आयोजनाबाट सन् २०१८ को फ्रेब्रुअरीभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । ३ वर्षअघि गएको जुरै पहिरोका कारण विद्युत् उत्पादनको मिति धकेलिएको आयोजनाले जनाएको छ ।